Sida Loo Xaqiijiyo Naqshadeynta Emailka Jawaabta Leh iyo Halka Caawinta Laga Helo! | Martech Zone
Waa wax laga naxo laakiin dad badan isticmaal taleefannadooda casriga si ay u aqriyaan emaylka sida dhabta ah ee wicitaanada taleefanka loo sameeyo (ku dheji sarbeeb ku saabsan isku xirnaanta halkan). Iibsashada moodellada taleefannada duugga ahi waxay hoos udhaceen 17% sanadba sanadka ka dambeeya iyo 180% dad badan oo ganacsato ah ayaa adeegsanaya taleefannadooda casriga si ay u eegaan, u shaandheeyaan, una akhriyaan emayl ka badan sidii ay sameeyeen dhowr sano ka hor.
Dhibaatadu, in kastoo, ay tahay in codsiyada emaylku aysan horay u marin sida ugu dhakhsaha badan ee daalacashada bogagga ay leeyihiin. Weli waxaan ku xayiran nahay macaamiisha websaydhka macaamiisha sida 'Muuqaalka' oo ku tiirsan HTML duug ah si ay u bixiyaan emayl si habboon. Macaamiisha emaylka ee cusubi waxay siin doonaan noocyadii ugu dambeeyay ee HTML iyo CSS si habboon, iyagoo u oggolaanaya khibradaha emaylka cajiibka ah. Ma sahlana in la diro emayl oo si habsami leh looga bixiyo xulashada ballaaran ee casriga, kiniiniyada, websaydhka, iyo macaamiisha barnaamijyada.
Waa lagama maarmaan in la isticmaalo mashiinka tijaabada sida Litmus (waxaan leenahay marka lagu daro tanyada madal samatabbixin leh 250ok, lamaane). E-maylka jawaabta leh waa iskudhaf HTML, CSS, iyo HTML cusub oo miis wadayaal ah. Qaabeynta iyo xitaa amarka lambarkaaga iimaylka ayaa muhiim u ah sare u qaadista akhrinta dhammaan muuqaalka.
Soodejiso Mawduucyada Emailka ee Bilaashka ah
Haddii ESP-kaaga uusan bixin shay jawaabo ah, waxaa jira ilo yar oo khadka tooska ah ah si looga caawiyo emaylka jawaabta leh:
Zarar - wuxuu daabacay taxane ah qaab-hawleedyo emayl oo jawaabaya.
Iimayl ku qor Acid - wuxuu kuu soo bandhigayaa taxane ah email-lada bilaashka ah si aad u kacdid oo aad u socotid sida ugu dhakhsaha badan.
Litmus xulasho ayaa dhistay Stamplia inaad kala soo bixi karto PSD-yada la xiriira.
Mailchimp ayaa ku daabacday qaar ka mid ah tusaalooyinka jawaabta Github. Iyo Jawaab ayaa ku darsaday horumarkooda.
Kheyraadka Emailka ee jawaabta leh - Uruurinta aaladaha iyo ilaha loogu talagalay naqshadeynta emaylka.
Dulucda waxay leedahay xulasho aad u tiro badan oo ah bixinno layaableh oo la bixiyo oo ay weheliso faylasha Photoshop iyo tilmaamaha.
Adeegyada loogu talagalay Naqshadeynta Emailka iyo Koodh-celinta Jawaabta ah
Uplers - haddii aad u baahan tahay naqshad cusub ama aad leedahay nashqad u baahan summad, dadka ku nool Uplers shaqo fiican ayey u qabteen in yar oo ka mid ah macaamiisheenna!
DK New Media - haddii aad haysato dhibaato gaar ah oo aad u baahan tahay xoogaa gargaar ah, ha ka waaban inaad gaarto!
Highbridge - haddii aad tahay macmiil Suuqgeyn ama Cafis oo aad raadineyso inaad hirgeliso naqshad cusub oo emayl ah, moodello, iyo sheybaallo emaillo wadaag ah, noo soo sheeg
Maaddaama ay yihiin suuqgeeyayaasha emaylka, nashqadeynta jawaabta waxay ahayd mowduuc aad u kulul dhowr sano maadaama koritaankan aan la qiyaasi karin uu soo ururiyey uumiga. Waxaan hada gaarnay heer naqshadeynta e-maylka jawaabta ah, IS naqshadeynta emaylka! Boggii ugu dambeeyay ee Instiller, waxaan ku soo uruurinnay fara-koob tiro badan oo indho qabad leh oo hoosta ka xarriiqaya muhiimadda ay leedahay u-adeegsiga macaamiisha mobilada isgaarsiinta emailkaaga.
Steve Painter, Qalab
Qalabaynta waa Adeeg Bixiye Email oo si gaar ah loogu dhisay hay'adaha bixiya xal dhammaystiran oo emayl ah si ay u qaabeeyaan, u diraan ugana warbixiyaan emaylka loo diray macaamiishooda (sidoo kale waxay ku jiraan qaar ka mid ah qalabka wax-soo-saarka iyo ilaalinta sumcadda).
Dadka ku xeel dheer Litmus waxay isku keeneen qoraalkan cajiibka ah ee la socda iyo, Habka-Loogu Hagayo Naqshadeynta Emailka.
Tags: 250okxaraashkaxalka emailka wakaaladaemail dhisenaqshadeynta emaylkaemail suufiyadoodiiemayl ugu dir asiidharagtida emaylkaGitHubrakibiyeliifmailchimpneteffektboostadaemaylka jawaabta lehdhise emayl wax ka qabtaNaqshadeynta emaylkaemail-ka jawaabta lehzurb
Liis gareyn: Waxyi Naqshadeynta iyo Cilmi-baarista Tartanka loogu talagalay Suuqgeeyayaasha Emailka
Twitter iyo Video, Sida looska looska iyo Jelly